Ikhaya elinethezekile e-Amish Country
Atglen, Pennsylvania, i-United States
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Donna
Zenzele ekhaya ekhoneni lethu elithokomele ezweni lama-Amish. Lesi isisekelo esikahle sokuhlola izifunda ezinhle zasePennsylvania zaseLancaster naseChester, esinikeza ukufinyelela okulula kuzo zombili izindawo ezikhangayo ezinkulu ze-Amish Country kanye nengcebo yalokho okuhlinzekwa yiChester County - ukusuka eLongwood Gardens kuya eKennett Square yomlando. Amaminithi kude ne-Moccasin Run Golf course kanye ne-Wolfs Hollow County Park.
Ikhaya elinethezekile nelinobungani bomndeni sikunikeza zonke izinsiza zekhaya lakho kude nasekhaya. Ikhishi lihlelekile futhi lihlonyiswe kahle uma ufuna ukupheka ngokwakho futhi vele lihlanganisa abenzi bekhofi ababalulekile kuhlanganise nomshini wokunyathelisa wase-french.Khumula izicathulo zakho, khahlela izinyawo zakho, uzenzele ekhaya!
Umgodi womlilo kanye ne-grill ozokusebenzisa egcekeni elingemuva.
Bamba futhi ukhulule ukudoba echibini eliphambi kwekhaya lethu.
QAPHELA: izithombe zibonisa isitofu sezinkuni. Nokho, ngenxa yezizathu zokuphepha, izivakashi azivunyelwe ukusebenzisa isitofu sezinkuni ekhaya.
Ikhaya lethu lisezweni ngakho-ke akukho ndawo eningi. Sabelana ngomgwaqo nomakhelwane abambalwa abaseduze. Ngaphandle kwalokho sinenkundla evulekile ngemuva naseduze kwethu kanye nechibi phambi kwethu. Yindawo ephephe kakhulu; lapho sihlala lapho asizange sikhiye imoto yethu noma indlu yethu. Futhi kufanele uqaphele ukuthi ngenkathi sizungezwe ezinye izinkundla ezivulekile kanye nechibi elingaphambili, kunomsindo wethrafikhi othi, uma ujwayele indawo yokulala ethule, ungathatha kancane ukujwayela (impendulo evela kwesinye sezihambeli zethu) .
Asihlali esizeni kodwa simane sishayelwa ucingo futhi singaba lapho uma kudingeka.